Bhadhara Essay muZimbabwe
Wako wega Bhadhara Kune Essay pasina zvakavanzika kubhadhara. Raira muZimbabwe tsika dzakatemwa kubva kuUK uye US vatauri vemo. 24/7 Tsigiro, Mahara Dzokororo uye yemhando yepamusoro inoshanda munguva pfupi
Maitiro Ekutora Kubhadhara KweEssay
Kubhadhara chinyorwa hakusi kwakaoma sezvaunofunga. Nhasi, kune akawanda mawebhusaiti uko iwe kwaunogona kuwana rondedzero yekunyora masevhisi nemitengo inonzwisisika. Nekudaro, chikamu chakanakisa nezve aya masaiti ndechekuti ivo vanopa zvakagadziriswa masevhisi ayo anogona chaizvo kubatsira kuita kuti basa rako rekunyora rive nyore. Iwe unogona kusarudza rondedzero yekunyora rondedzero kubva kune imwe saiti uye uwane ese ese masevhisi avanayo. Nekudaro, kana iwe uchida kuziva kuti ndeipi kambani yakanakisa, heano mamwe matipi ekukubatsira.
Paunenge uchitsvaga yekunyora rondedzero sevhisi, tsvaga mumwe munhu ane ruzivo rwekuhaya vanyori vezvinyorwa. Izvi zvinoreva kuti vakatora vanhu vasati vagona kunyora zvakanaka pazvinyorwa. Iwe unogona kutarisa kuti mangani ezvinyorwa zvavakanyora uye verenga wongororo dzebasa ravo kuti uone kana vaine basa remhando yepamusoro kana kwete.
Munyori ane hunyanzvi ane hunyanzvi anogona kubatsira kunatsiridza kunyora kwako kwenyaya Ivo vanogona kupa matipi ekuti nyora zvirinani uye maitiro ekuita kuti zvive nyore kwauri. Ivo vanozotokupa iwe mazano ekuti iwe uite sei kuti ive yakasarudzika uye inonakidza kune vaverengi. Izvi zvichaitawo kuti chinyorwa chako chinyanye kufadza purofesa wako kana vakuru vechikoro.
Ehezve, iwe haufanire kungowana munyori asina ruzivo kuti aite rondedzero yako yekunyora. Pane kudaro, iwe unofanirwa kubvunza shamwari yako kana nhengo dzemhuri nezve masevhisi avo. Nenzira iyi, iwe unozogona kutarisa hunyanzvi hwemunhu uye nekuwana imwe vimbiso yekuti iye anogona kuita zvakanaka pachinyorwa chako.
Chinhu chinotevera kuita kuenzanisa akasiyana makambani ekunyora zvinyorwa. Tarisa pamitemo yavo yechibvumirano uye nemitero yavo yekunyora zvinyorwa. Unogona kusarudza kambani inopa kukwikwidza mitengo yekunyora, asi ita shuwa kuti iwe uchazowana basa remhando yepamusoro kana ukasarudza yakachipa kambani.
Tarisa uone basa rekambani. Kumbira munyori kuti akuratidze nemienzaniso yemapurojekiti ake apfuura kuti mugoona kana manyorerwo ekunyora iye anoshandisa zvinoenderana nezvamunoda. Kana iwe uchida kuhaya mumwe munhu anoshandisa unorthodox maitiro ekunyora, saka iwe unofanirwa kufunga nezve kambani isingateedzere tsika yechinyakare yekunyora.
Iwe unofanirwa zvakare kutsvaga zvimwe zvinhu zvakaita sekubhadhara chirongwa uye nemhando yebasa ravanopa usati wafunga kushandisa yekunyora rondedzero sevhisi. Kunyangwe vazhinji vanopa masevhisi vachakupa yemahara sampuro yeyako basa, tarisa kana basa ravanopa rakakodzera. Usasaine chibvumirano nekuti iwe wakapihwa chipo chinonzwika zvakanaka.
Kuhaya nyanzvi yekunyora rondedzero kunogona chaizvo kukubatsira iwe kana zvasvika kune kwako basa uye hupenyu hwedzidzo. Iwe unozogona kunyora yakanaka-inotaridzika pepa redzidzo iyo inokwezva yakawanda yekutarisisa kubva kumapurofesa ako.
Kunze kwekutora mapepa akawanda akanyorwa, iwe zvakare unozokwanisa kuwana yakanaka mari kubva mukunyora rondedzero. Izvi zvinogona kukubatsira iwe kuchengetedza hupenyu hwakanaka hwemagariro sezvo vazhinji vevadzidzi vekoreji vachigara vachishuva kuwana basa rakanaka kuti vatange kuwana mari ivo vachiri nezvidzidzo zvavo.
Iwe zvakare unofanirwa kuyedza kuzvisimbisa iwe pachako mune zvedzidzo nyika kana iwe uchida kuvaka yakanaka mukurumbira mumunda. Izvi zvinokubatsira iwe kujairana nevanhu uye nenyaya dziri mumunda. Nekuziva kunyora mapepa akanaka, iwe unozokwanisa kugonesa mapurofesa ako nevadzidzisi kuti vakupe mamwe mabasa. sezvo iwe uchizikanwa semunhu anoshanda nesimba uye akavimbika munyori.
Izvo zvakare zvakanaka kana iwe uchikwanisa kushandisa hunyanzvi hwako hwekunyora kuti uwane basa rakanaka. Iwe unogona nyore kumhara basa rinokutendera iwe kuti ushande mukumhanya nekukurumidza uye muhofisi. pachinzvimbo chekushanda mufurati. Kana iwe uchitova wenguva yakazara mudzidzi, unogona kugara uchishanda mufurati nekuti unenge uine nguva yakawanda yekutarisira zvako zvaunoda.
Nekudaro, iwe haufanire kubhadhara kubhadhara kune chinyorwa kuti uwane basa rakanaka. Nzira yakanakisa yekuwana basa nemari yakanaka ndeyekunyoresa kuyunivhesiti. Mazhinji mayunivhesiti ane mabhezari uye zvipo zvekunyora vadzidzi. Iwe unogona kunyorera uye kugamuchira aya marudzi erubatsiro rwemari kuitira kuti utange kuvandudza hunyanzvi hwako hwekunyora uye kuwana mari.